Covid ကြောင့် မင်္ဂလာပွဲမလုပ်ရလဲ အမျိုးသားနေ့မှာပဲ ချစ်သူနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးယူတော့မယ်ဆိုတဲ့ နိုင်းဝမ်း – အနုပညာရပ်ဝန်း
Covid ကြောင့် မင်္ဂလာပွဲမလုပ်ရလဲ အမျိုးသားနေ့မှာပဲ ချစ်သူနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးယူတော့မယ်ဆိုတဲ့ နိုင်းဝမ်း
ချစ်သက်တမ်းတွေကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ရွှေလက်တွဲဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ကပ်ရောဂါ ဆိုးကြီးကြောင့် အချိန်တွေရွှေ့ဆိုင်း ခဲ့ရတဲ့နိုင်းဝမ်းတစ်ယောက် ရောဂါရဲ့ ပထမဖြစ်ရပ်မှာလည်း ချစ်သူလေးနဲ့ခရီးသွားဖို့အစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ရပြီး ခုတစ်ခေါက် မှာလည်း Second Wave ထပ်ဖြစ်တာမို့ မင်္ဂလာပွဲအစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပြန်ပါပြီ။
နှစ်ယောက်အတူပျော်ရမယ့်ခရီးတွေကို ခဏခဏဖျက်နေရတာမို့ နိုင်းဝမ်းတစ်ယောက် အတော်လေးကိုမကြေမချမ်းနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါ တယ်။ နှစ်ယောက်အတူရည်ရွယ်ထားတဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးမလုပ်ဖြစ်ရင်လည်း လက်မှတ်ထိုးပြီးအတူနေမယ့်အကြောင်းပြောတဲ့အခါ ချစ်သူလေးက ” ယူမှာပါ ထွက်မပြေးပါဘူး ” ဆိုပြီး စနောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
မိန်းမရပြီး မြန်မြန်အိုချင်နေတဲ့အကြောင်းကို ” မိန်းမလဲတောင်းပြီးသွားပြီ!ငဗစ်ကြောင့် မင်္ဂလာမဆောင်ရသေးလဲ အမျိုးသားနေ့ကြ လက်မှတ်ထိုးပြီးတစ်အိမ်ထဲနေမယ် ဒါပဲ! ” ဆိုပြီး ခပ်နောက်နောက်လေးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ရောဂါတွေလည်းအမြန်ဆုံးကင်းရှင်းပြီး မင်္ဂလာပွဲကြီး ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲကျင်းပနိုင်ပါစေ နိုင်းဝမ်းရေ။
ချစ်သက်တမ်းတွေကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ရွှေလက်တွဲဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ကပ်ရောဂါ ဆိုးကြီးကြောင့် အချိန်တွေရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့နိုင်းဝမ်းတစ်ယောက် ရောဂါရဲ့ ပထမဖြစ်ရပ်မှာလည်း ချစ်သူလေးနဲ့ခရီးသွားဖို့ အစီအစဉ်ကို ဖျက်လိုက်ရပြီး ခုတစ်ခေါက် မှာလည်း Second Wave ထပ်ဖြစ်တာမို့ မင်္ဂလာပွဲအစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပြန်ပါပြီ။
နှစ်ယောက်အတူပျော်ရမယ့်ခရီးတွေကို ခဏခဏဖျက်နေရတာမို့ နိုင်းဝမ်းတစ်ယောက် အတော်လေးကို မကြေ မချမ်းနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ယောက်အတူရည်ရွယ်ထားတဲ့ မင်္ဂလာပွဲလေးမလုပ်ဖြစ်ရင်လည်း လက်မှတ်ထိုးပြီး အတူနေမယ့် အကြောင်းပြောတဲ့အခါ ချစ်သူလေးက ” ယူမှာပါ ထွက်မပြေးပါဘူး ” ဆိုပြီး စနောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။
မိန်းမရပြီး မြန်မြန်အိုချင်နေတဲ့အကြောင်းကို ” မိန်းမလဲတောင်းပြီးသွားပြီ!ငဗစ်ကြောင့် မင်္ဂလာမဆောင်ရသေးလဲ အမျိုးသားနေ့ကြ လက်မှတ်ထိုးပြီးတစ်အိမ်ထဲနေမယ် ဒါပဲ! ” ဆိုပြီး ခပ်နောက်နောက်လေးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ရောဂါတွေ လည်းအမြန်ဆုံးကင်းရှင်းပြီး မင်္ဂလာပွဲကြီး ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲကျင်းပနိုင်ပါစေ နိုင်းဝမ်းရေ။CREDIT
အမှန်တွေပြောရင်ဘေးရောက်တတ်လို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးပဲနေတော့မယ်ဆိုတဲ့ ဘေဘီမောင်